इन्टरनेट बिना म्यासेज गर्न सकिने मोबाइल एप – Nepali Tech Blog
हामी स्कुल पढ्दा मोबाइल के हो थाहा सम्म थिएन । तर साथीहरुबिच च्याटिङ नै नहुने भने हुन्थेन । हाम्रो स्कुले जीवनमा कागजका टुक्रामा लेखेर पेपर च्याटिङ गर्थ्यौँ । कागजमा लेख्दै एक अर्काले पास गर्दै पुर्याइन्थ्यो । अहिले हात हातमा मोबाइल भएपनि पेपर च्याटिङको जमाना सकि गएको भने छैन । हुन त, भाइबर, फेसबुक म्यासेज, स्नापच्याट आदि धेरै छन् म्यासेज गर्न सकिने मोबाइल एपहरु । फरक फरक विशेषता भएका यी एपहरुको समानता भनेको इन्टरनेट हो । सबै म्यासेजिङ एपहरुलाई प्रयोग गर्न म्यासेज पठाउँने र पाउँने दुवैको मोबाइल वा डिभाइसमा इन्टरनेट जोडिएको भने हुनै पर्छ । वाइफाइ नभएको कक्षाकोठामा खर्च गरि गरि मोबाइल इन्टरनेटबाट वा एसएमएसबाट लामो समय च्याट गर्नु सँधै भरि सम्भव हुने कुरा पनि भएन । यसैले पैसाको बचत गर्ने उत्तम विकल्प भनेको पेपर च्याटिङ नै हो अहिले पनि ।
तर यसको विकल्प पनि छ ।
आज यहाँ पेपर च्याटिङको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिने मोबाइल एपको बारेमा चर्चा गर्दैछु । सो एपमा इन्टरनेट बिना म्यासेज गर्न सकिन्छ र यसलाई मोबाइलमा राख्न पैसा पनि लाग्दैन । यसका लागि म्यासेज पठाउँने र पाउँने दुवैको डिभाइसमा यो एप इन्सटल भएको हुनु पर्छ । सो एपको नाम हो फायरच्याट । गुगलको प्ले स्टोर वा एप्पल स्टोरमा firechat सर्च गरेर तपाइले यो एप आफ्नो डिभाइसमा इन्सटल गर्न सक्नु हुन्छ (डाउनलोड गर्ने लिंक तल दिइएको छ ।) । यो सित्तैमा पाइने एप हो ।
इन्टरनेट बिना कसरी पठाउँछ म्यासेज ?
इन्टरनेटको सट्टा यसले तपाईको मोबाइलको ब्लूतुथ प्रयोग गर्छ । यसैले म्यासेज पठाउँन वा पाउँन तपाईको मोबाइलको ब्लूतुथ सक्रिय भएको हुनु पर्छ । यसको कमजोरी भनेको ब्लूतुथको परिधिभित्रमात्रै म्यासेज पठाउँन र पाउँन सकिने हुनु हो । यसले तपाईको कक्षाकोठाभित्र म्यासेज लिन र पठाउँन भने उपयुक्त हुन्छ ।
कक्षाकोठा भित्र साथीभाइसँग च्याटिङ गर्न यो भन्दा राम्रो विकल्प अरु कुनै हुन्छ र ? सित्तैमा जति पनि म्यासेज गरे भयो । कागजमा लेखेर चलखेल त गरिरहनु पर्दैन ।
एन्ड्रोइड मोबाइलमा डाउनलोड गर्न यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।
एप्पल स्टोरबाट डाउनलोड गर्न यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।
तपाई यो जानकारी उपयोगी लागे यो लेखको लिंक फेसबुक या ट्विटरमा सेयर गर्न नभुल्नु ल ।
latest एन्ड्रोइड एप्पल मोबाइल एप